Barwaaqo replied to Khadafi's topic in Politics
Innaa Lillaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun, Alle naxariistiisa janno ha ka waraabiyo marxuumadda. Ilaahay Samir iyo iimaan ha siiyo caruurteedda , waalidkeed , ehelkeed iyo dhamaan ummadda Somaliyeed, amiin. Iftiin-damiye Alle umadda ha ka qabto, aamiin,
Holac Hanayn baan u jeeday, hambalyanna way noqon kartaayoo , qoraalkiisu wuxuu ku aadanaa in uu ku faraxsan yahay Somaliland guusheedda.
Mustafe Cagjar oo hanayntiihambalyadii noogu daray soo dhawayn . Mahadsanid @Abtigiis
^^^^^^^ Xaajo Allamtara soo dhaaftay ee nolosha cusub soo dhawee.
Cigaal Shiidaad: “Naftu waa malab oo way macaan -tahay’e war soow laxdu na cuntee “ Farmaajo: “Naftu waa malab oo way macaan -tahay’e war soow rashku /fireworks-ku na dilee”
Allahayow nin daacadda Allahow nin daalinna/xaasidda ;deeqdaadda haw simin. by Hadraawi
Kenya is cornered by Somalia and might lose more than the sea boundaries.
Barwaaqo replied to galbeedi's topic in Politics
Galbeedi, sheeko-xariirtaadda inaan ku Margaday uun baan kuu sheegay. FYI, taako Somali leedahay bad iyo beri toonna cid kale uma ogoli -(huuno , dhiiga tuumbo laygama nuugin) .
Oo falkaasu miyaanu Ethopia iyo Kenya colaysiinayn? Galbeedi bahasha bun ka dhin!
Bal office cinwaankiisa soo sheeg.
Barwaaqo replied to Maaddeey's topic in Politics
Midnimo dhimatay kii bakhti afuufayaa isagaa ku daali! Mar Hadii aadan biriij hawadda sare mara oo na dul Mara, aanad dhidibadda u aasi karin iska miciinso hadal iyo qoraalka aad meelahaa ku xaradho.
Office-kaa ninku sheegayo baadhnayoo weynay. Maxaa cadaynaya In ninku Hargeysa joojo?
Reer Hargeisa waynaga ilbaxsan yihiin kuye bileys, bileeys. Dhulka uun baan taaban lahayn hadaan reer Burco nahay! Somalia calankeedu ha jiro baanu leenahay balse Jamhuuriyadda barakaysan ee tashatay fowdo uma ogolin iyo inan/wiil yar oo $100 loo soo diray,